Ogaden News Agency (ONA) – Wargeysyada & TV-yada Turkiga oo Maanta looga hadlay Qadiyada Ogadeniya:
Wargeysyada & TV-yada Turkiga oo Maanta looga hadlay Qadiyada Ogadeniya:
Posted by ONA Admin	/ February 4, 2013
Wadanka Turkey ayaa maanta waxaa lagu soo daabacay Saxaafada in kabadan 20 wargeys iyada oo caawa TV-yada wadankaas laga daawan doono filimaan ka hadlaysa Qadiyada Ogadeniya iyo taariikhda halganka shacabka Somalida Ogadeniya iyo marxaladaha ay shacabkaas ku sugan yihiin maanta.
Saxaafada Turkida ayaa kusoo booqday jaaliyadaha Ogadeniya ee wadanka UK iyaga oo wareysiyo ka qaaday jaaliyadahaas islamarkaasna waxa ay suxufiyiintan kasoo jeeda wadanka Turkey ay maclumaad aad u dheer oo xogag badan ku jiraan kasoo diyaariyeen dhulka Ogadeniya dhinac taarikheed iyo halganka ay ku jiraan shacabka Somaldia Ogadeniya ay kula dirirayaan gumeysiga Madow.
Hadaba Saxaafada kasoo baxda wadanka Turkey ayaa cinwaanka ugu horeeya waxa uu ahaa sawiraan muujinaya halganka shacabka Somalida Ogadeniya waxaana cinwaan looga dhigay- “Ummada Muslimiinta ah ee Turkida ayaa Codkayaga noqonaya”
Saxaafada Turkida ayaa si aan horey u dhicin ugu soo jeedsaday qadiyada Ogadeniya-walaalahooda muslimiinta ah ee ku hoos jira gacanta Gumeysiga madow.
Jaaliyadaha Ogadeniya ee kusugan Dibadaha ayaa olole dheer u galay sidii ay walaalaha Muslimiinta ah gaar ahaan wadanka Turkey ay saaxiibo ula noqon lahaayeen. Islamarkaasna qadiyada Ogadeniyana loo gaadhsiin la haa 74-ta million ee shacabka Turkey si ay hiil iyo hooba ula garab istaagaan shacabka Ogadeniya. Midaas oo guul laga gaadhay iyada oo shacab aad u xoog badan oo turkey ahi maanta aqoon buuxda u leeyihiin qadiyada Ogadeniya islamarkaasna cadaadis badan saari doona gumeysiga Ethiopia.
Shacabka iyo Wadanka Turkey ayaa xadaarad ahaan iyo siyaasad ahaanba saameyn weyn ku leh siyaasada Caalamka.
Maanta waxaad ka daawan kartaan TV-yada wadanka Turkey qadiyada ogadniya oo si qoto dheer looga faalonayo ama waxaad ka daalacan kartaa wargeysyada waaweyn ee kasoo baxa wadankaas cadadkoodi taarikhda maanta.
Linkiyadan ka fiirso qeybo kamida warbixnaha kuso baxay saxaada Turkida maanta-
Filimka socdaalki Wariyasha ee Jaaliyada kuso booqden halkan ka bgo
\_”Turkish Muslims to be our Voice\_”
TV-ga Turkey saacada 5 galabniyo iyo fiidki